प्रचण्डलाई झड्का दिंदै ओलीले दिए यस्तो ‘सरप्राइज’! अब के गर्लान् ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रचण्डलाई झड्का दिंदै ओलीले दिए यस्तो ‘सरप्राइज’! अब के गर्लान् ?
प्रचण्डलाई झड्का दिंदै ओलीले दिए यस्तो ‘सरप्राइज’! अब के गर्लान् ?
admin December 26, 2020 समाचार	0
काठमाडौं । पार्टी विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषदको हेरफेर र बिस्तार गरेका छन् । टोपवहादुर रायमाझी उर्जा मन्त्री भएका छन्, मणी थापा खानेपानी मन्त्री भएका छन् भने प्रभु साह शहरी विकास मन्त्री भएका छन् । त्यस्तै र प्रेम आले वन मन्त्री भएका छन् भने गणेश ठगुन्ना सामान्य प्रशासनमन्त्री र गौरी शंकर चौधरी श्रम मन्त्री भएका छन् ।
दावा लामालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । जुली कुमारी महतो महिला बालबालिका मन्त्री भएकी छन् भने विमला विश्वकर्मा उद्योग राज्यमन्त्री बनेकी छन् । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाल पर्यटन र संघीय मामिला मन्त्री रहेका हृदयेश त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइएको छ ।
त्यस्तै यसअघिका महिला बालबालिका मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ कानुन र कानुमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई भूमिव्यवस्थामन्त्री मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । मोती दुगड र जगत विश्वकर्मालाई भने मन्त्रीपदबाट हटाइएको छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाएर नयाँ मन्त्री राखेका हुन्। विश्वकर्मा २ चैत २०७४ मा खेलकुदमन्त्री बनेका थिए भने दुगड ८ मंसिर ०७६ मा भएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा मन्त्री बनेका थिए।
विश्वकर्माको ठाउँमा प्रचण्ड समूहबाट ओलीलाई साथ दिन आएका दावा लामालाई मन्त्री खेलकुद मन्त्री बनाइएको छ । सिन्धुपाल्चोकबाट प्रदेशसभा सांसदका पदका लागि उठेर पराजित भएका लामा पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन्। यस्तै दुगडको स्थानमा बिमला विश्वकर्मालाई उद्योग राज्य मन्त्री बनाइएको छ।
यसै क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त आठ मन्त्रीलाई आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनालगायतको उपस्थिति थियो । थप भएका नयाँ मन्त्रीहरुले शपथ लिएका हुन् ।
यसैबीच नवनियुक्त उद्योग राज्यमन्त्री विमला विश्वकर्मालाई प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले आज मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नौ सदस्य थप गर्नाका साथै केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् ।
गाउबाट युवाहरु बिदेशिन थालेपछि यो बहिनीले यसरि हलो जोत्दै ! भिडियो हेर्नुहोस र बहिनीकाे सम्मानका लागि शेयर गर्नुहाेला
भाग्यमानी श्रीमान/श्रीमतीः जो एकैपटक प्रहरीमा डिएसपी बन्दैछन् !